5 Xul Ee Koobka Aduunka Ugu Cad-cad, In Neymar Uu Real Imaanayo & Asensio Oo Masiirka Zidane Ka Hadlay %
Da’yarka kooxda kubada cagta Real Madrid, ee Marcos Asensio, ayaa wuxuu ka hadlay wararka sheegaya in naadigiisa ay lasoo wareegeyso Neymar JR, kaasoo sanad ciyaareedkii hore Barcelona kaga biiray PSG xili 222 Milyan lagu iibsaday.
“Waan arki doonaa hadii ay dhacdo in Neymar aan ka garab dheelo, hadda ma ahan mid aan ku fikirayo, maxaa yeelay wuxuu horteena yaalo waxyaabo badan oo muhiim ah,” ayuu Asensio ku jawaabay mar la weydiiyay wax ku saabsan Neymar.
“Waa ciyaaryahan weyn, kaasoo wax badan ku muujiyay PSG iyo waliba Barcelona, marka waan arki doonaa hadii aan kuwada kulano meeshay ahaato,” ayuu hadalkiisa kusii daray, laacibkaan muhiim-ka ka noqday shaxda Zidane.
Sidoo kale, xidigaan reer Spain ayaa waxaa kaloo wax laga weydiiyay arrimo ku saabsan mustaqbalka macalin Zidane, kaasoo hadda uu shaki badan uu kujiro, islamarkaana la sheegayo inuu ka tagayo kooxda, hadii uu Champions League qaadi waayo.
“Waxaan rumeysanahay inuu nala sii joogi doono, wuxuu wariyay wax walba isagoona ka dhigay wax wanaagsan – wuxuu muujiyay inuu ku guuleysan karo hampions League,” ayuu ku jawaabay mar la weydiiyay hadii Zidane uu Real sii joogayo.
“Marka, waxaan u arkaa aniga fikrad ahaan teyda macalinka kaliya, waxaana wax walba uu ka dhigay kuwa fudud wuxuuna kooxda ku leeyahay qiimo weyn, taasoo aan marnaba la ilaabi karin,” ayuu cod dheer ku sheegay.
Asensio ayaa waxyaabaha kale, ee uu soo hadal qaaday inta uu warbaahinta la hadlayay ayaa waxaa kamid ah koobka aduunka ee sanadkaan Ruushka lagu qaban doono, isagoona soo xushay Shanta wadan ee ugu cadcad qaadistiisa.
“Koobka aduunka waa mid aad u adag, sidaasoo ay tahay waxaan nahay kuwa koox ahaan xoog badan, waxaana haysanaa fursad aan ku qaadi karno,” ayuu Asensio ku bilaabay hadalkiisa, si uu wariyaasha la hadlayay.
“Marka hadda waxaa jira xulal kuwaasoo heerar kala duwan ku jira wax walba ayaana dhici kara – Brazil waa ku xoog badan, Germany ayaa sidoo kale – Intaas kadib England iyo France waa kuwa iyaga wax go’aamin kara,” ayuu sii daba dhigay.